यो उनको हजुरआमा एक छुट्टी लागि अर्को शहर छोराछोरीलाई पठाउन आवश्यक छ, र आमाबाबुले काम गर्न जाने छैन? वा कलेज मा अध्ययन गर्न इङ्गल्याण्ड उड गर्न छोरी? वा, बच्चा तुरुन्तै इस्राएलका उपचारको लागि पठाइने?
कुनै समस्या! अब संसारभरि एयरलाइन्स को बहुमत नातेदार द्वारा unaccompanied बच्चाहरु को यातायात रूपमा यस्तो सेवा छ।
यात्रा सफल भयो, तपाईंले हवाइजहाज मा बच्चा समर्थन को नियम जान्नु आवश्यक छ।
जसले सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
"विमान मा बच्चा सँगैको" सेवा आवश्यक, बच्चाहरु 5-12 वर्ष पुरानो दिइएको अनुरोध मा किशोरों गर्न 16-18 वर्ष (कम्पनी आधारमा) आदेश गर्न सकिन्छ।
सेवा कसरी प्राप्त गर्ने?
आदेश मात्र आमाबाबुले वा संरक्षक "एक हवाइजहाज मा बच्चा सहयोग गर्नुहोस्"।
unaccompanied बच्चाहरु लागि airliner सिट को एक नम्बर विनियोजन गरिएको छ रूपमा यो उडान अघि त कुनै पछि 36 घण्टा भन्दा बढी गर्न सिफारिस गरिएको छ।
सेवा ", विमान मा बच्चाहरु साथमा" हामी सबै वाहक छैन। यो टिकट खरिद गर्नु अघि स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।
टिकट खरीद वा बुकिंग जब तपाईं तुरुन्त बच्चा unaccompanied उड भनेर रिपोर्ट गर्नुपर्छ।
यो प्रत्यक्ष उडान चयन गर्न प्रत्यक्ष उचित छ।
तपाईं अर्को विमानस्थल गर्न स्थानान्तरण को बिन्दु सार्न आवश्यक भएमा बच्चाहरु यातायात लागि स्वीकार्य छैन।
"विमान मा बच्चा सँगैको" सेवा एक शुल्क आधारमा प्रदान गरिएको छ।
लागत निम्न अंक निर्भर:
टिकट खरिद गर्ने ठाउँ।
उडान को प्रकार (घरेलू वा अन्तर्राष्ट्रिय)।
एक सानो यात्री को उमेर।
सेवाहरूको लागत बारे एयरलाइन मा पाउन सकिन्छ।
टिकटको मूल्य आदेश गर्दा सेवाहरू समर्थन
एक unaccompanied बच्चा लागि टिकट को लागत वयस्क भाडा (छुट उपलब्ध छैन) को 100% छ, र तपाईं पहिल्यै यो पर्छ।
के कागजात आवश्यक हो?
घरेलू वा विदेश - कागजातहरू को सही सेट यसलाई उडान छ कि छैन भनेर निर्भर गर्दछ। तपाईं गर्नुपर्ने हुन सक्छ:
देश र मिति द्वारा विमान को एक प्रतिनिधि सँगसँगै 18 वर्ष मुनिका बच्चाहरु को एक यात्रा (एक नोटरी को हस्ताक्षर संग) मा दुवै आमाबाबुबाट सहमति।
रोग को इतिहास, एक निकाल्ने संग नुस्खा बच्चा तपाईं दबाइ संग हुनेछ भने।
प्रस्थान को विमानस्थलमा
बोर्ड unaccompanied बच्चाहरु दर्ता मात्र टर्मिनल भवन मा बाहिर, त्यसैले तपाईं अग्रिम आउन पर्छ।
बच्चाहरु अभिभावक वा अर्को "आफ्नै" वयस्क प्रतिनिधि सँगसँगै हुनुपर्छ। एक सँगैको आवश्यकता मा आफ्नो पहिचान साबित, फोटो संग कागजातहरू को अधीनमा रहेका हुन।
वयस्क, उडान लागि बच्चा रजस्टर विशेष कागजातहरू भरिन्छ: आवेदन र सँगैको पाना।
एक बयान मा, सबै आवश्यक जानकारी (यो उडान छ कि छैन भनेर आधारमा वैकल्पिक - घरेलू वा अन्तर्राष्ट्रिय) प्रदान गरिएको छ:
बच्चा को नाम।
भाषा बच्चा द्वारा बोली।
नाम, ठेगाना र टेलिफोन नम्बर प्रतिनिधि, एक बच्चा पठाउने।
नाम, ठेगाना र टेलिफोन नम्बर प्रतिनिधि, बच्चा भेट्न।
सँगैको पानामा एयरलाइन र उडान परिचर को प्रतिनिधिहरु मा डाटा फिट गर्न - त्यो छ, ती जो बच्चा साथ दिनु हुनेछ।
हालको नियमहरू अन्तर्गत unaccompanied सामान उडान गर्दा स्वीकृत भएको छ। उसलाई सम्पर्क जानकारी सूचीबद्ध जुन मा एक विशेष लेबल संलग्न हुनुपर्छ।
यो कुरा एक न्यूनतम सैलून तपाईं संग बच्चा लिन उचित छ।
बच्चाहरु कागजात र शब्दहरू "unaccompanied बच्चा" विशेष झोला प्राप्त र यो गुमाउन, तपाईं सधैं बोक्न गर्नुपर्छ असम्भव छ भनेर बताए।
अवतरण लागि भौचर।
सामान लागि रसिद।
साथी सेवाको लागि आवेदन।
विमानस्थलमा, आमाबाबुले सँगैको पानामा यसो एयरलाइन को बच्चाहरु प्रतिनिधिको पास। को अधिकारी प्रत्येक बच्चा सबै जाँच संग जान्छ। त्यसपछि उहाँले उसलाई विमान सँगसँगै र सँगैको सूचीमा संकेत परिचारिका हात गर्न हात बाट बित्दै।
आमाबाबुले प्रस्थान अघि हावा टर्मिनल हुनुपर्छ।
बच्चा आरामदायक र सुरक्षित स्थान मा उतरने मा अन्य यात्रु अघि पहिले विमान मा राखे।
उडान भर, छोराछोरी निरन्तर विशेष प्रशिक्षण जहाँ तिनीहरूले बच्चाहरु र आफ्नो सबै समस्या समाधान गर्न कसरी संग संचार को नियम सिकाइएको undergo गर्ने परिचारिका द्वारा पछि देख्यो।
Stewardesses ती सबै प्रश्नहरूको जवाफ, शौचालय तल escorted र (विमान सामान्यतया प्रत्येक बच्चा खेल एक सेट दिन्छ) पनि रम्न।
विमानस्थलमा आगमन मा
अवतरण गरेपछि अन्तिम बच्चा, विमान हटाइएको छ र उडान परिचर गन्तव्य विमानस्थलमा एयरलाइन कर्मचारी यसलाई बित्दै।
यदि जडान, अप airliner को प्रवेश गर्न सँगसँगै छोराछोरीको प्रतिनिधि आफ्नो उडान। एक प्रत्यारोपण प्रतीक्षा गर्दा, तिनीहरू शीतल पेय, रस, चिया (समर्थन सेवाहरू आदेश भएपछि पहिले नै भुक्तानी) प्रस्ताव गरिनेछ।
बच्चा तपाईं व्यक्ति लेट छ भने पनि, (यो कागजात आफ्नो पहिचान पुष्टि हुनुपर्छ उसलाई) आवेदन मा नाम व्यक्ति पूरा आइपुग्दा सम्म सम्म प्रतिनिधि को पर्यवेक्षण अन्तर्गत छ।
उहाँले विमानस्थलमा आइपुगेका थिए भने, मेरो आमाबाबुले कल र तिनीहरूले (निर्दिष्ट ठेगाना वितरित बच्चा साथ दिनु वा अर्को उडान उहाँलाई घर पठाउन) भन्न रूपमा गर्न एयरलाइन स्टाफ। यस मामला मा, तपाईं लागत थप भुक्तानी गर्न हुनेछ।
बच्चा समर्थन। "Aeroflot"
सेवा "विमान मा सँगैको छोराछोरीलाई" मात्र यसको आफ्नै उडानहरू उपलब्ध छ।
सोह्र को उमेर अन्तर्गत र किशोरों - यो पाँच बाह्र वर्ष देखि छोराछोरी, इच्छामा लागि उपलब्ध छ।
विमान मा बच्चा को सेवा मर्मतका "Aeroflot" भुक्तानी: यसको मूल्य 40 यूरो प्रत्येक तरिका हो।
मूल्य 100%, छुट बिना - सेवा टिकट मूल्य आदेश गर्दा।
एउटा टिकट खरीद र आरक्षण सूचित हुनुपर्छ जब बच्चा एक्लै उडान। छ
सेवाहरू विशेष आवेदन र समर्थन लागि अनुरोध भर्न लागि।
Mourners व्यक्ति विमान प्रस्थान गर्न टर्मिनलमा भवन मा रहनेछ।
"Sheremetyevo" विमानस्थल टर्मिनल डी unaccompanied बच्चाहरु को लागि कोठा छ, एक दिन 24 घण्टा खुला छन्। यहाँ बच्चा उडान मा एक अवतरण लागि प्रतीक्षा, कम्प्युटर र हेर्ने कार्टून मा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ।
विशेष जो आवश्यकता एक बच्चा। किनभने चिकित्सा प्रमाण वा अन्य कारण खाना, तपाईं जब तपाईं टिकट किन्न, तर उडान अघि पछि छैन पन्ध्र दिन भन्दा यसलाई निःशुल्क आदेश गर्न सक्नुहुन्छ।
एक प्रत्यारोपण प्रतीक्षा गर्दा, छोराछोरी एक ताजा पेय, रस, चिया (यदि प्रत्यारोपण समय -3घण्टा) प्रस्ताव गरिनेछ र तातो खाना (6 घण्टा गर्न प्रत्यारोपण लागि)। समर्थन सेवाहरू आदेश गर्दा transplantation (क्रमशः,5र 20 यूरो) प्रदान यदि यो सबै भुक्तानी भएको छ।
"Aeroflot" एक विमान केटाकेटीलाई को समर्थन रूपमा, यो सेवा फाइदा लिए गर्नेहरूलाई कस्तो लाग्छ? यो सेवा प्रयोग गर्ने मान्छे को समीक्षा बच्चा आफ्नो ध्यान लागि विमान कर्मचारीलाई कृतज्ञता व्यक्त, overwhelmingly सकारात्मक भएको छ।
छोराछोरी झोला (वा फाइल) को घाँटी मा हङ धेरै सुविधाजनक को कागजात, संग जहाँ उहाँले पारित गर्ने बच्चा प्राप्त कसलाई टिप्पणीहरू को सँगैको पानामा कम्पनी को प्रत्येक प्रतिनिधि।
अर्थव्यवस्था वर्ग बाट कि अक्सर किशोर यात्री पनि व्यापार मा transplanted याद गर्नुहोस्।
"Aeroflot" organizovato को विमान मा बच्चा सँगैको सानो यात्रु सहज महसुस होस्। उडान भर, अनुकूल stewardesses निरन्तर छोराछोरी केहि यसलाई चिसो छैन भने, यो चोट छैन भने तिनीहरूले एक पेय चाहन्थे वा शौचालय प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सोधे। बच्चा नरमाइलो भने, पुस्तक उहाँलाई पढ्न वा कथाहरू बताउनुहोस्।
.. अनि उडान समय झिंगा - कम्पनी सामान्यतया यस्तो जो एक रोमाञ्चक खेल Kiddies गर्न सम्भव बनाउँछ जो crayons समावेश टिन सुटकेश, पर्चा, रंग, आदि, रूप, बच्चाहरु उपहार दिन्छ!
2012, मास्को देखि न्यूयोर्क दुई भाइहरू र पाँच नौ वर्ष द्वारा unaccompanied उड्यो जहाँ एक मामला मा भयो चारैतिर फैलियो। उडान मा, तिनीहरूलाई पुरानो धेरै बिरामी पेट, ज्वरो - तीव्र appendicitis छ आशङ्का थियो। रिकिविक मा अप्रत्याशित आपतकालीन अवतरण गरिएको थियो। उडान परिचर माइकल जहाँ बिरामी केटा राम्ररी जांच अस्पताल गर्न भाइहरूले सँगसँगै। खुसीको कुरा, सबै बाहिर काम गरे। माइकल सँगसँगै छोराछोरी, तिनीहरूले एक tearful तर हँसिलो आमा भेट जहाँ न्यूयोर्क, आइपुगे।
कहिलेकाहीं मानिसहरूले उडान समयमा उडान परिचारक नजिकका बसिरहेका यात्रु आफ्नो काम shouldering, जवान यात्री ध्यान छैन भनेर लेख्नुहोस्। तर यस्तो नकारात्मक समीक्षा धेरै केही छन्।
विमान S7 मा सँगैको बच्चाहरु ( «साइबेरिया»)
Ojsc "एयरलाइन" साइबेरिया संग "" करार अनुसार:
र किशोरों अप 16 वर्ष - अर्डर ट्रयाकिङ सेवा, बच्चाहरु 5-12 वर्ष पुरानो यदि चाहेको लागि हुन सक्छ।
एउटा टिकट सेवा अभिभावक वा संरक्षक, सीधा कम्पनीको बिक्री कार्यालय वा विमानस्थल टिकट कार्यालयमा किन्न मात्र हुन सक्छ भर्न र प्रतिबद्धता एक बयान हस्ताक्षर र।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवहन लागि दुवै आमाबाबुले (वा संरक्षक) एक बच्चा यात्रा (एक नोटरी सार्वजनिक द्वारा हस्ताक्षर) को को सहमति आवश्यक छ।
"विमान मा बच्चा सँगैको" सेवा आफ्नै उडानहरू निर्देशन गर्न अनुमति दिएको छ र उडानहरू मा कम्पनी "Globus" संग संयुक्त रूप संचालित।
टिकट मूल्य - छुट बिना मूल्य 100%।
बच्चा विमान मा एक आरामदायक र सुरक्षित सीट खडा।
सामान वजन स्तर अन्तर्गत नि: शुल्क।
विमान मा बच्चाहरु साथमा, "रूस"
"Aeroflot" को एक समूह - यो विमान उड्डयन होल्डिंग को सहायकहरूले को छ।
सेवा "विमान मा बच्चाहरु साथमा," मात्र यसको आफ्नै उडानहरू मा चल्छ।
भुक्तानी एक हवाइजहाज मा बच्चा को सेवा मर्मतका। लागत कार्यालय वा कम्पनी वेबसाइटमा पाउन सकिन्छ।
एक प्रत्यारोपण प्रतीक्षा गर्दा, छोराछोरी एक ताजा पेय, रस, चिया वा तातो खाना (विमानस्थलमा मा निवास समय मा निर्भर गर्दछ) प्रस्ताव गरिनेछ। प्रत्यारोपण लागि प्रदान यदि यो सबै, सेवा समर्थन आदेश गर्दा भुक्तानी भएको छ।
"टिकट कार्यालय": यात्रुहरू को समीक्षा। साइट प्रतिक्रिया "Aviakassa.ru"
बच्चाको जन्मदिन लागि तालिका कसरी सजाउनु गर्न? रोचक विचार
सेवस्तोपोलमा के देख्नुहुन्छ? सेभस्टोप मा नौसेना परेड। Crimea, सेवस्टोपोल
फिचर चलचित्रहरू, जहाँ धेरै सेक्स: एक सूची, समीक्षाहरू र समीक्षाहरू
शब्द को एक सुन्दर पत्र कसरी लेख्न मा केही सुझावहरू
इन्टरनेट मार्केटिङ - यो ... छ इन्टरनेट मार्केटिङ को विकास
पावेल Egorovich Chekhov: एक जीवनी। Chekhov परिवार। बुबा Antona Pavlovicha Chehova
एफिडसँग कसरी व्यवहार गर्ने: विकल्पहरू